यसकारण घट्न सकेको छैन नेपालमा काेराेना संक्रमणदर – Health Post Nepal
यसकारण घट्न सकेको छैन नेपालमा काेराेना संक्रमणदर
२०७८ जेठ ९ गते १९:२१
नेपालमा निषेधाज्ञा जारी रहँदा पनि आवगमनमा कडाइ नहुँदा काेराेना संक्रमण फैलिइरहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
आम नागरिकले सरकारले तोकेको निषेधाज्ञा अझै पालना नगरेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
‘७४ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा हुँदा आवागमन कमी ८० प्रतिशतसम्म होला भन्ने आँकलन गरिएको थियो। तर, अध्ययनले ६० प्रतिशतमात्र कम रहेको देखाएको छ। त्यसकारण संक्रमण सोचेअनुरुप घटाउन सकिएको छैन,’ डा. पौडेलले भने।
परीक्षण बढाउन र संक्रमण घटाउनका लागि सबैको साथ–सहयोग चाहिने डा. पौडेलले भनाइ छ।
कोरोना महामारीमा टोल, समुदायस्तरमा सजक नभएसम्म महामारी नियन्त्रण गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
‘धेरै जनामा संक्रमण हुँदा अस्पतालको शय्या, अक्सिजन तथा आइसीयुचाहिन्छ,’ डा. पौडेलले भने,’ त्यसकारण महामारीबाट बँच्न प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्छ।’
दैनिक रूपमा ८ हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिँदै जानुले पनि थप समस्या निम्तिरहेको डा. पौडेल बताउँछन्।
मन्त्रालयको १ देखि ६ जेठसम्मको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा संक्रमण बढी फैलिन थालेको छ।
‘उपत्यकामा संक्रमण घट्दै र बाहिर जिल्लामा बढ्दै गएको छ’, निर्देशक डा. पौडेलले भने, ‘चैत महिनाको अन्तिम र जेठ पहिलो साता द्रूत गतिमा संक्रमण फैलिएको थियो ।’
तर, अघिल्लो साताको तुलनामा थोरैले संक्रमण घटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘५ दशमलब ७ प्रतिशतले संक्रमण घटेको छ’, मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा डा. अर्चना श्रेष्ठले भनिन्।
बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा संक्रमण दर घटेको छ भने कर्णाली प्रदेश २ र प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमण दर बढिरहेको छ ।
अघिल्लो साता सबैभन्दा धेरै संक्रमण दर प्रदेश २ मा बढेको छ। यस प्रदेशमा अघिल्लो साता १०५ प्रतिशतले संक्रमण बढेको थियाे।
डा.श्रेष्ठका अनुसार पहिलो लहरको तुलनामा अहिले संक्रमण ३ गुणाले बढेको छ ।
पहिला संक्रमण उत्कर्षमा पुग्दा प्रति १ लाख जनसंख्यामा संक्रमणदर १३१.७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३०७ प्रतिशत पुगेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५० वटा जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ ।
‘अघिल्लो वर्षको लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा ३ गुणा बढीले संक्रमण फैलिएको छ’, डा. श्रेष्ठले भनिन्।
पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा पोजिटिभ दर धेरै देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पहिलो लहरमा २५ प्रतिशत पोजिटिभ दर थियो, दोस्रो लहरमा ४६ प्रतिशत देखिएको छ ।
‘पहिलो लहर र दोस्रो लहरको तुलनामा सोही उमेर समूहमा कोरोना संक्रमण देखिए पनि यस पटक भने युवाहरुलाई धेरै संक्रमण भएको पाइएको छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘धेरैलाई अक्सिजन तथा आइसियु बेड आवश्यक रहेको कारण स्वास्थ्य प्रणालीलाई थेग्न गार्‍हाे परेको छ।’
कोरोनाको दोस्रो लहरमा मृत्युदर पनि बढेको डा. पौडेलले बताए।
संक्रमण कम गर्न सुक्ष्म योजना अनुसार कोरोना रोकथाम समूह टोलटोलमा परिचालन गर्न मार्ग निर्देशन जारी भएको उनले जानकारी दिए।
कोरोना परीक्षण गर्न एन्टिजेन परीक्षण हरेक प्रदेशमा पुर्‍याइएको उनले बताए।
प्रदेश १ मा एक लाख ७५० हजार, प्रदेश २ मा २ लाख, बागमतिमा २ लाख र थप १ लाख काठमाडाैंमा, भक्तपुरमा र ललितपुरका लागि ५०-५० हजार, लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ५० हजार, कर्णाली प्रदेश १ लाख ५० हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख बाँड्ने क्रममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।